SHEEKO: Doonista Alle Ayaan Dunida Ku Imid !! | Dhamays Media Group
Qaaradda afrika inaan ku dhashana waxay aheed nasiib kale! Balse inaan soomaali ka dhasho kuna dhasho dhulkii udgoonka waxay aheed hadiyad qaaliya oo ilaahay iigu deeqay.!
Ma garanayo dalkeyga bedkiisa mana garanayo tirada dadkeyga mana garanayo somali qofkan ka ahay.
Waxay dhahaan dadkeeygu waxaad tahay ubaxii dalka iyo mustabalkii berrito, waxaad tahay rajadii iyo riyadii la sugayay ee soomaaliyada cusub.
Ubaxu wuxu u baaahan yahay biyo lagu waraabiyo si uu dhaqsi u koro looguna il doogsado. Aniguna waxaan u baahnaa naxariis,aqoon iyo dal-jaceyl in la igu waraabiyo! Balse nasiib daro waxaa la igu waraabiyay dhawaqa rasaasta iyo dhiiga jirkayga ka qulqulaya!.
Ilmada indhahayga ka da’aysaa maahan cabsi aan hada ka qabo wixii ii gaaray balse waaa cabsi aan ka qabo mustaqbalka dalkeyga.
Erayadu ma sharxi karaan xanuunka iyo welwelka aan dareemayo hadda. Si fiican ii fiiri kama wado qoraalka fiiri ee waxaan ula jeedaa sawirkayga si fiican u eeg, Kama wado indhahaaga igu eeg waxaan ula jeedaa indhaha qalbigaada igu eeg. Weliba indhahayga fiiri waxaad ka aqrisan doontaa fariin ciwaaankeedu yahay
“Maxaa la iiga ooysiiyay oo la ii dhaawacay”?
Bal fiiri walal waxaan jirkayga ka taagan waa dhumuc rasaas, Ma ahan al-alaabadaydii aan ku cayaari jiray, Tani waa wax xanuun badan oo hilibkayga gubaysa!.
Dhaawaca jirkayga gaaray waxaa iiga naxdin badan, Dhaawaca gaaray qalbigayga iyo rajadaydii ifaysay. Waayo waa laga yaaba inaad biyo la’aan maalmo noolaato, Laakiin qof-na rajo la’aan ma noolaan karo maalin.
Anigu waxaan xaq u leeyahay inaan ku noolaado nolol qurxoon iyo nabad aan ku nasto, Waxaan xaq u leeyahay in la i siiyo farxad iyo naxariis, si la mid ah carruurta dhigaygaa ee ku nool washington iyo Riyaadh.
Ma jirto cid aan dembi ka galay, Mana jiro qof aan waxyeelayay, Ma garanayo sababta la i dhaawacay, Mana garanayo cida dhibkaan ii geysatay.! Ma garanayo waxa la iiga ooysiiyay anigoo og in ilmadaydu ay ka qaalisan tahay dheeman ka aduunka yaal!.
Wax walba ilaahay qadartiis waana ku qanacsanahay, Waxa kaliya oo aan hubo ayaa ah in allaah uu san i dayici doonin hadii dadkaygii i dayaceen. Waan hubaa inkastoo aan hada aan murugaysanahay, Weli waxaa ii muuqanaya mustaqbal dhoolacadeynaya.
Waan ogahay inaad ila xanuunsanaynso adigu! Waxaan ka wadaa adigaan hada aqrinaya hadalkayga. Waad ku mahadsan tahay sidaad iila qaybsatay murugada!.
Xigasho: Facebook-ga Mustafe Cabdi Cali
Previous: DEG-DEG: Shan Carruur Ah Oo Qarax Ku Dhintay + VIDEO
Next: BBC-da La Hadasha Afrika: Maxaa Loo Aqoonsan Waayay Somaliland ? (Wareysi Maad Ah)